Iphrojekthi ye-Google Asylo: i-Computing eyimfihlo | Kusuka kuLinux
I-Google ilungiselela ukuphromotha lokho okwaziwa ngokuthi i-computing eyimfihlo ngephrojekthi ebizwa nge-Asylo. Ngakho-ke, inkampani enkulu yokusesha izama ukuqhubekisela phambili ukwakhiwa kwepharadigm entsha ye-IT ngokugcizelela imfihlo, ukusiza ukuvikela ubuqotho bemithwalo yomsebenzi nomaphi lapho iqhutshwa khona. Lowo ngumbono, bonke abanye bangahlulela wena ...
UGoogle akayedwa ngalomqondo, sekuvele kunezinkampani eziningana eseziba nentshisekelo kulolu hlobo lweparadigm. Kepha ufuna ukuhola le thambeka nge Iphrojekthi ye-Asylo, iphrojekthi yekhodi open ezokwenza kube lula ukwenziwa kwalokho esikubize ngokuthi yi-computing eyimfihlo. Futhi lokhu kungenxa yokuthi babheka ubumfihlo njengesinyathelo esilandelayo sokunikeza ukwethemba kumakhasimende abo, ukwethenjwa abasebenzisi abebekulahla ngezindaba zakamuva.
Manje kuhloselwe ukunikeza ukulawula okuningi nokuvikeleka efwini kumsebenzisi. Lokhu kuzobe kuvikela futhi kubethela idatha ukuvimbela izinkinga zokuphepha ngenxa yezingozi ezingaba khona ngenxa yehadiwe eposwayo, kanye nokunikeza ungqimba lwezokuphepha ekubhekaneni nobuthakathaka benethiwekhi, amasistimu okusebenza afakwe ebucayini. Kepha njengoba kwenzeka njalo, ngemuva kokukhohliswa komthetho, ngaphandle kwalokho akukho lutho oluyi-100%, kepha lezi zenzo zomzimba ziyaziswa ...
IGoogle ihlose nokwenza kube lula konjiniyela, ngakho-ke akudingeki bakhathazeke ngobuchwepheshe obusezingeni eliphansi bezinkinga zokuphepha, futhi bavele bagxile ekwenzeni uhlelo lokusebenza lusebenze. Ngale ndlela, iGoogle ifuna ukudala ifu eliphephe kakhudlwana futhi kube njalo, futhi basebenzisana nabahlinzeki behadiwe abaningi abanjengo I-Intel ne-AMD, futhi nabo bayahlola Linux ukuhlangabezana nezidingo zokuphepha ezidingekayo.
Imininingwane engaphezulu evela ku-Asylo
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » Iphrojekthi ye-Google Asylo: i-Computing eyimfihlo
Kungakuhle ukuthi le bhulogi ibe nama-akhawunti kwi-mastodon, isiteshi sethelegramu .. ukuhambisana nezindaba .. Ngiyakuhalalisela ngomsebenzi wakho
Ngiyabonga kakhulu ngokuhalalisela! Kuyaziswa !!
Amakheli we-IPv4 azophela futhi sekuyisikhathi sokuthuthela ku-IPv6
Inguqulo entsha ye-Chrome OS 72 isiyatholakala manje